ဆီလီနီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
black, red, and gray (not pictured) allotropes
အာဆင်းနစ် ← ဆီလီနီယမ် → ဘရိုမင်း
polyatomic nonmetal, sometimes consideredametalloid
amorphous: 37 µm/(m·K) (at 25 °C)
amorphous: 0.519 W/(m·K)
−25.0·10−6 cm3/mol (298 K)
အတည်ငြိမ်ဆုံး ဆီလီနီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 8.4dε – 72As
γ 0.046 –
0.86% is stable with 40 neutrons
syn 119.8dε – 75As
9.23% is stable with 42 neutrons
7.60% is stable with 43 neutrons
23.69% is stable with 44 neutrons
trace 3.27×105 y β− 0.151 79Br
49.80% is stable with 46 neutrons
8.82% 1.08×1020 y β−β− 2.995 82Kr
ဆီလီနီယမ်သည် အတွေ့ရနည်းသော ဒြဗ်စင်တစ်ခုဖြစ် သည်။ ထိုဒြဗ်စင်သည် သတ္တုမဟုတ်သော ဒြဗ်စင်မျိုးဖြစ်၍၊ အောက်ဆီဂျင်၊ ကန့်၊ တယ်လျူရီယမ်ဒြဗ်စင် အစုတွင်ပါဝင် သည်။ ၁၈၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံသား ဓာတုဗေဒပညာရှင် ဗာဇီးလီယပ်က စတင်၍တွေ့ရှိသည်။ အက်တမ် နံပါတ်စဉ်မှာ ၃၄ ဖြစ်၍၊ အက်တမ် အလေးဆမှာ ၇၈့၉၆ ဖြစ်သည်။ ဆီလီနီယမ်၌ ထူးခြားသော သတ္တိများရှိသည်။ အမှောင် ထဲတွင် ဆီလီနီယမ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက် ညံ့သောဒြဗ်စင် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဆီလီနီယမ်ပေါ်သို့ အလင်းရောင်ကျ ရောက်လျှင် ခဏခြင်းပင် ကျရောက်သော အလင်းရောင်၏ အားနှင့်အမျှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အလိုက်မှာ ပို၍ကောင်းလာ၏။ ထိုထူးခြားသည့် သတ္တိကိုအကြောင်းပြု၍ အလင်းရောင်အားကို တိုင်းသောကရိယာ ပြုလုပ်ရာတွင် ဆီလီနီယမ်ကို အသုံးပြု ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဆီလီနီယမ်ကို အသုံးပြု၍ အလင်းအားကို တိုင်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ ပြင်ပနှောင့်ယှက်မှုများမှ ကင်းစေရန်အတွက် ဆီလီနီယမ်ကို အိမ်ငယ်အတွင်းတွင် ထားပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆာကစ်နှင့် ဆက်သွယ်ထားရသည်။ ထိုလျှပ်စစ်ဓာတ်ဆာကစ်တွင် ဂယ်လ ဗာနိုမီတာဟု ခေါ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်စီးအားတိုင်းကရိယာကို တပ်ဆင်၍ထား၏။ အလုံပိတ်ထားသော အိမ်ငယ်၏ အလင်း ဝင်ပေါက်ကိုဖြတ်၍ အလင်းတန်းကို လွှတ်လိုက်သောအခါ ထိုအလင်းတန်း၏ အားကို ဆီလီနီယမ်က တိုင်းတာဖော်ပြ လေသည်။ ထိုအပြင် ဆီလီနီယမ်ကို အသုံးချခြင်းဖြင့် အလင်း ရောင်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်စီးအဖြစ်သို့၎င်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်စီမှတစ်ဖန် စကားပြောကြေးနန်းကရိယာမှာကဲ့သို့ အသံအဖြစ်သို့၎င်း ပြောင်းလဲစေနိုင် သေးသည်။
ဆီလီနီယမ်သည် မျက်မမြင်များအတွက် အထူးအကျိုး များစေသော ဒြဗ်စင်ဖြစ်သည်။ မျက်မမြင်များ စာဖတ်နိုင်ရန် အတွက် ပြုလုပ်ထားသော လင်းသံပြောင်း (အော့ပတိုဖုန်း)ခေါ် ကရိယာတွင် ဆီလီနီယမ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ထိုကရိယာ သည် စာလုံးများမှလာသော အလင်းရောင်ပြောင်းလဲချက်များကို အသံအဖြစ် ကြားစေနိုင်စွမ်းရှိ၏။ ဂရေဟမ် ဗဲသည် စကား ပြောကြေးနန်းကို မတီထွင်မီ၊ ဖိုတိုဖုန်းခေါ် ကရိယာကို ဦးစွာ စမ်းသပ်ကြည့်၏။ ဖိုတိုဖုန်းတွင် စကားပြောလိုက်သောအခါ အသံသည် အဝေး၌ရှိသော ဆီလီနီယမ် အသံဖမ်းခွက်ပေါ်၌ တုန်ခါသော အလင်းတန်းတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်ကျ ရောက်စေ သည်။
ဆီလီနီယမ်၏ ဓာတုဂုဏ်များသည် ကန့်၏ ဓာတုဂုဏ် များနှင့် ဆင်တူသည်။ ဆီလီနီယမ်သည် ဖန်အရောင်ကို ချုပ် စေရာတွင် အထူးအသုံးဝင်၏။ ညအခါ လမ်းပြမီးတိုင်တွင် ရှိသော အနီရောင်ဖန်မျိုး၌ ဆီလီနီယမ်များစွာပါ၏။ ဆီလီ နီယမ်သည် အလင်းရောင်၏ အားကိုတိုင်းရာတွင် အလွန်အသုံး ဝင်သောကြောင့် နေရောင်၊ လရောင်နှင့် သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော ကြယ်ရောင်ခြည်များကို တိုင်းတာရန် အတွက် ဆီလီနီယမ် ဓာတ်အိုးများကိုအသုံးပြုရ၏။ စကားပြောကြေးနန်း နှင့် ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းအားဖြင့် ရုပ်ပုံများကို ခရီးဝေးသို့ပေးပို့ရန် အတွက်၎င်း နေ့ဖက်တွင်ငြိမ်း၍ ညဖက်တွင်လင်းသော ဆိပ် ကမ်းဓာတ်မီးများနှင့် လမ်းပြဓာတ်မီးများ ထွန်းရန်အတွက်၎င်း ဆီလီနီယမ်ကို အသုံးပြုရ၏။ ဆီလီနီယမ်သည် အလင်းအား အနည်းအများလိုက် သတ္တိပြနိုင်သည်မှန်သော်လည်း၊ ယခုခေတ် တွင် ထိုဒြဗ်စင်အစား ဖိုတို အီလက်တြစ်အိမ်ကို အသုံးများကြ ပေသည်။ အလင်းအားနှင့်ပတ်သက်သည့်နေရာတွင် ဖိုတိုအီ လက်တြစ်အိမ်က ဆီလီနီယမ် ထက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာ သတ္တိပြနိုင် သည်။( ဖိုတိုအီလက်တြစ်ကရိယာများ။) 
↑ Greenwood၊ Norman N.; Earnshaw၊ Alan (1997)။ Chemistry of the Elements (2nd ed.)။ Butterworth-Heinemann။ ISBN 0-08-037941-9။
↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005)။ CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.)။ Boca Raton (FL): CRC Press။ ISBN 0-8493-0486-5။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆီလီနီယမ်&oldid=704271" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။